Daawo Jaaliyadda Norway oo taageeray Shabelle State -Digil-Hawiye-Reer Xamar « BredaNews
Breda Tv, Wararka, Xulka wararka
Daawo Jaaliyadda Norway oo taageeray Shabelle State -Digil-Hawiye-Reer Xamar
5450 Views Date July 7th, 2014 time 12:52 am
Bredanews.com – Jaaliyadda Somalida dalka Norway ayaa si rasmiya u taageeray maamulka Shabelle state of Somalia.sidoo kalena waxay kashifeen sir culus oo la xiriirta in ololaha socda uu yahay sidii loola wareegi lahaa gobolka Banaadir.
Masuuliyiinta ka qeybgalay kulanka taageerada waxaa ka mida Xildhibaan Waceeys oo ka tirsan golaha baarlamaanka Norway.
“Hadii Bay iyo Bakool la hoos geeyo Shabeelada hoose,tilaabada xigta waxay tahay inay yiraahdaan Banaadir anagaa maamulno maxaa yeelay Jazeera iyo lafoole waxay ka tirsan yihiin Shabeeladda hoose” ayey yiraahdeen Jaaliyadda Norway.
Nin ka mida waxgaradka hadlay ayaa yiri ” Hawiye kursiga Villa Somalia darteed maalin kasta dhulkooda looma xaraashi doono”
Qadiyada Baraawe iyo Kismaayo ayey ku tilmaameen arrin isla socota oo siyaasadeeysan.
Hawiyaha soo baraarugay xilli dhulkooda uu shisheeye u xalaaleeyay nin u dhashay beesha Reer Aw Xasan oo lagu magacaabo Faarax Cabduqadir waxaa muhiima in hore loo dhaqaajiyo si loo badbaadiyo inta hartay.